MOTORS SERIES Y - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducer hafainganana, variatera, kojakoja helika, kodiarana bevel sprial, boaty fiompiana, boatin-traktera, giratra kamiao, boaty kankana
Home / Motor / Y MOTORIASA
Y series Motors Y andiana motera dia motera tsy misy ifandraisany amin'ny voltaka ambany, izay andiany fototra ho an'ny tanjona ankapobeny. Ity andiam-motera andiany ity dia afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny ankapobeny ho an'ny motera misy tanjona anatiny sy ampitan-dranomasina misy faritra manodidina ny 80 ka hatramin'ny 315. Ity andiany maotera ity dia natao araka ny fenitra niraisan'ny firenena. Ny maotera Y series dia manana tombony amin'ny fahombiazana avo lenta, fitsitsiana angovo, fahombiazan'ny asa tsara, hovitrovitra kely, tabataba ambany, androm-piainana lava, fahamendrehana avo lenta ary fikojakojana mora. Ny refin'ny fametrahana sy ny tanjaky ny herinaratra dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra IEC. Izy ireo dia ao amin'ny insulated kilasy B, diplaoma IP 44 ho an'ny fiarovana sy ny fomba fampangatsiahana IC411. Ny refy malefaka sy ny insulation matetika an'ny andiany Y dia 380v sy 50HZ. Ny fifandraisana Y dia raisina ho an'ny motera latsaky ny 3kw (3kw tafiditra) ary ny fifandraisana adopted dia raisina ho an'ireo mihoatra ny 4kw (4kw tafiditra). Y andiana motera dia matetika ampiharina amin'ny fitaovana milina tsy misy fepetra manokana.
Daty teknikan'ny andiany